तपाइँको नि: शुल्क केन्टो मिठाई पकाउने किताब दावी गर्नुहोस् - स्वास्थ्य विरूद्ध
घर » पुस्तक » तपाइँको नि: शुल्क केन्टो मिठाई पकाउनुहोस्
तपाईं केटो डाइट योजना अनुसरण गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईं डेसर्टहरू मन पराउनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ? धेरै व्यक्तिहरूको लागि, तिनीहरू डेजर्टहरू फेला पार्न संघर्ष गर्दछन् जुन केटोजनिक आहारको लागि उपयुक्त छन्। तपाईं या त गम्भीर खाना पकाउन कौशल हुन आवश्यक छ स्वादिष्ट मिठाईहरू तयार गर्नका लागि अनुमति नभएको सामग्रीहरू प्रयोग नगरी वा तपाईंलाई केटोमा आधारित मिठाईका व्यंजनहरू पछ्याउन आवश्यक छ। यी कुनै पनि बिना, डेसर्टहरू बनाउनु जुन केटोको लागि स्वीकार्य हो गर्न कठिन हुनेछ। केटो मिठाईहरू प्रस्तुत गर्दै!
यदि तपाईं उत्कृष्ट चखने केटो मिठाई व्यंजनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामीसँग तपाईंको लागि उत्कृष्ट समाचार छ। हाम्रो मित्र Kelsey Ale पहिलो पहिलो NNUMX मान्छे को लागि आफ्नो नयाँ केट मिठाई मिठाई व्यञ्जन किताबहरु को लागी मुफ़्त को लागी पेशकश गर्दै छन्। केटो मिठाईहरू कुकुरमा पोषक पोषकजन आधारित मीठे व्यञ्जनहरू छन् जुन अविश्वसनीय स्वाद हुन्छ।
केटो मिठाईको पुस्तक भित्र, तपाईंले 80० केटो आधारित मिठाईका व्यंजनहरू भेट्टाउनुहुनेछ जसमा विभिन्न किसिमका मिठाईहरू समावेश छन् बदाम बटर ब्राउन बाइट्स, चकलेट कभर बेकन बाइट्स, केटो आइसक्रिम, पुदिना ब्राउनिज, चकलेट हूपी पाई, केटो निम्बू बारहरू, केटो पप्पलहरू , पेकन स्यान्डिज, रास्पबेरी चकलेट बार्क, र अधिक।
यहाँ क्लिक आजको लागि यो केटो मिठाई नुस्खा नुहाउने पुस्तकको प्रतिलिपि हरु पूर्णतया निःशुल्क! तपाईं भर्खरै ढुवानीको लागि तिर्नु पर्छ।
तपाईको अर्डरको साथमा free नि: शुल्क उपहार पनि समावेश छ। तपाईंले Day दिने केटो भोजन योजना, केटो स्वीट्स शपिंग सूची र सामग्री गाइड, र केटो स्टार्ट गाइड प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यो केटो मिठाई कुकबुक 100% नि: शुल्क छ। तपाईलाई सोधिएको छ कि शिपिंग र हैंडलिंग को कवर गर्न को लागि एक सानो शुल्क तिर्नु पर्छ र केन् मिठाई कुकबुक टीम बाकी को हेरचाह गर्नेछन्। यहाँ क्लिक तपाईंको केटो डेसर्ट नुस्खा पुस्तक पाउनुस्